I-roulette yengxoxo yevidiyo - ukuxhumana ngaphandle kwemingcele 24/7
I- roulette yengxoxo yevidiyo iyindawoyamahhalalapho ungaxoxakhona kalulanamantombazanenabafana abanesimo esihlukile senhlalo abavela emazweni ayi-197 omhlaba.Ukuze uthole i-interlocutor, awudingi ukushiya ikhaya lakho elithokomele, kwanele ukufinyelela i-Intanethi.
Iwebhusayithi ye -Chatrouletteikhiqiza kabusha umqondo wokuqala wesevisi yesimanje yobungane nokuxhumana ngaphandle kwemingcele yendawo noma yobudala.Ungabamba iqhaza ezingxoxweni nganoma yisiphi isikhathi sosuku futhi 100% uthole umuntu ojabulisayo.
Umgomo wokusebenza kwe-roulette yevidiyo ye-inthanethi
Ukuxhumana nabanye abasebenzisi kwenzeka ngokuphelele kuseva yethu.Umthamo wayo ungamelana nokugeleza okukhulu kwezivakashi.I- roulette yengxoxo yevidiyoyenziwa ku-inthanethi, ngaphandlekokubhaliswaokude futhimahhalangokuphelele.Uhlelo lubonisa ividiyo yomsebenzisi futhi lunikeza ukufinyelela kukhamera yewebhu.
I-interlocutor ikhethwa ngokuzenzakalelayo, lena uhlobo lwe "roulette yaseRussia".Ukuze wenze lokhu, kusetshenziswa indlela yezinombolo ezingahleliwe, emva kwalokho uxhumano lusungulwa ngokuqondile.Lobu buchwepheshe abusebenzisi amaseva njengabalamuli.Ngenxa yalokhu, akunakwenzeka ukuthola indawo yezivakashize-roulette yengxoxo ye-inthanethi.Isevisi isebenzisa ukusesha okungahleliwe, inikeza ukuxhumana okuhlangene, futhi ayidingi ukulanda abashayeli.
I-"plus" eyengeziwe yesistimu ukuthi awudingi ukufaka noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu, awudingi ukukhombisa "i-imeyili" noma ukuza "nesidlaliso", zonke izenzo zenzeka ngemva kokuchofoza oku-2 izinkinobho zomsebenzi.
Kungani udinga i-roulette yengxoxo yevidiyo ngaphandle kokubhalisa?
Thola abangani/ojwayelene nabo.Umsebenzi, ukutadisha, amahloni angama-banal akukuvumeli ukuthi uthole umngane wangempela?I- roulette yengxoxo yevidiyoiyithuba lokuqala ukuxhumana okunobunganenamantombazanenoma abafana ngaphandlekokubhalisa.Lolu khetho lokuthola umngane lusebenza kakhulu, ngoba.ikuvumela ukuthi ungakhawuleli umbuthano kozakwenu kuphela, ofunda nabo noma obaziyo, kunezinkulungwane zamakhandidethi abonakalayo phambi kwakho.Kumodi engaziwa, kulula kakhulu "ukuvula", ukunqoba amahloni okungenzeka futhi uthole umuntu okuqonda ngempela.
Thola "soulmate" yakho.I- roulette yengxoxo yevidiyoikuvumela ukuthi ungagcini njengokujwayelanane-inthanethinentombazaneenhlenoma umnumzane onesibindi, kodwa futhi ubabone ngesikhathi sengxoxo engenamkhawulo.Ithuba elihle lokufunda okhethiwe ukusuka kokuthi "A" kuye kokuthi "Z" ngaphambi komhlangano okungenzeka ungaxhunyiwe ku-inthanethi.Esigqini sesimanje sempilo, indlela ebonakalayo yokuthola u-missus ishesha kakhulu futhi ilula kunasezweni langempela.Ibhonasi eyengeziwe - "usuku" lungaphazanyiswa nganoma yisiphi isikhathi, kuvalelisa isoka/intombi ematasa unomphela.
Yazi abantu bakwamanye amazwe.Ingxoxo yevidiyoiyisevisiengenamingceleendaweni yokuxhumana, ungakhulumamahhalafuthi ngemizuzwana nje nezakhamizi zamazwe angomakhelwane noma angaphandle.Ngaphezu kwalokho, leli yithuba elihle lokufunda izilimi zakwamanye amazwe noma ucije ikhono lakho lokukhuluma, ungasebenzisi izincwadi zokufunda noma i-inthanethi, kodwa ngokuqondile nesikhulumi somdabu.Ngaphezu kwalokho, uma ufisa, ungahamba uhambo, wazi ukuthi ezweni ongalazi kukhona umuntu ozohlangana naye futhi enze izinkambo ezikhumbulekayo.
I- Chatrouletteiyingxoxo yevidiyoye -inthanethi yamahhala ngokuphelele yokwazanaisikhathi eside noma esifushane, ukudlala ngothando okungathí sina noma okulula nabafana nomaamantombazane.Ibuye isetshenziswe lapho udinga nje ukukhuluma nomuntu futhi uthole ukwesekwa kokuziphatha.Ngokuvamile kulula ukulungisa isimo esibucayi ngosizo lomuntu ongamazi kunesihlobo.Ukungaziwa kuyisiqinisekiso sokuthi ungaxoxa ngesihloko "esishisayo" ngaphandle kokubheka amahloni.
Ungayiqala kanjani ingxoxo yevidiyo ngaphandle kokubhalisa?
I-PC, ithebhulethi noma amanye amadivaysi ongaxhuma kuwo ikhamera yewebhu;
isikhathi samahhalasengxoxo yevidiyo eku-inthanethinabafana,amantombazane.
I-nuance ebalulekile.Ungaxoxa ngaphandle kwekhamera usebenzisa inkambu ethi "Umlayezo bhala lapha".
Izilungiselelo zesevisi zinembile, ngisho nabaqalayo abangakabambi iqhaza ekuqomeni okujabulisayo okujabulisayo.Uhlelo luzokhetha amakhandidethi okuzijabulisa okujabulisayo kumasekhondi angu-2-3.
Ingxoxo yevidiyo yamahhala eku-inthanethiizoqalangaphandle kokubhalisa, ngemva kwesivakashi:
vakashela iwebhusayithi ye-Chatroulette;
chofoza inkinobho ethi "Vumela ikhamera yewebhu";
uzophendula isicelo "Vumela i-flash player" kahle;
chofoza inkinobho ethi "Qala ukusesha umngane".
Ukusakazwa kwabafisa ukuxhumana kuyaqala.Ungamisa ekuqaleni kwazo noma "phenyisisa" ngokuchofoza "okulandelayo".Ifomethi enjalo ayikuphoqi ukuba ujwayelane nomuntu ongathandiwe, ukukhetha kokugcina kuncike kuwe kuphela.
Ikabani isevisi ye-Chatroulette?
ufuna ukujwayelana kodwa uyesaba/namahloni ukukwenza "bukhoma";
umatasa kakhulu, akanaso isikhathi samahhala sokuthola abangane / othandekayo;
ukhetha indlela yesimanje, eyingqayizivele yokuxhumana;
ngifuna indlela engasho lutho yokusebenzisa "imizuzu" yamahhala.
Futhi nakubantu bayo yonke iminyaka, ubungcweti, izinkolo nemibono ngempilo.Akukho "ukulawula ubuso" noma imvunulo eyisibopho yokuphuma.Unquma ukuxhumana usebenzisa ikhamera nemakrofoni noma ukuxoxa.
Izinzuzo zesevisi ye-Chatroulette
Ukusebenzisa le fomethi yengxoxo kulula kakhulu futhi kuphephile.Izinzuzo eziyinhlokozengxoxo yevidiyo ye-rouletteimodi ye -inthanethi, sebenzisamahhalakanye nenani elingenamkhawulo labavakashi, ungaxoxanamantombazanenoma abafana.
100% "imfihlo".Akukho ukubhaliswa lapha, alukho ulwazi oluzodingeka kuwe, ngisho negama lokuqala noma i-imeyili.
Ukuxhumana 24/7.Ukufinyelela kusayithi kuyatholakala nganoma yisiphi isikhathi sosuku, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinsuku zeviki noma izimpelasonto, amahora okusebenza noma amaholide.
Ukuqomisana ngaphandle kwemingcele.Nge-roulette yevidiyo ye-inthanethi yengxoxo , ubulili bezivakashi, indawo yazo, ukukhethaukuthiiyiphiintombazanenoma umfana ongaxoxa nawe akubalulekile.
Ukusebenziseka kalula.Asikho isidingo sokulanda nokufaka isofthiwe ekhethekile, konke kwenzeka "bukhoma", kumodi yokusakaza ividiyo.
Ukukhetha okusheshayo kwamakhandidethi.I-algorithm yesistimu isethwe ngendlela yokuthi ibonise abantu abasha abafuna ukuxoxa esikrinini sakho emizuzwaneni embalwa.
Umsebenzisi uvula umhlaba wonke, ocwaningweni lapho umuntu engadingi ukonga imali yokuhamba isikhathi eside, "ukusika" isikhathi phakathi komsebenzi noma ukufunda.Ungaxoxa nabamele amazwe ahlukene lapha futhi manje.
wandise ama-horizons akho kanye ne-geography yabantu obajwayele;
ukwandisa ukuzethemba futhi ulahle ama-complexes ekukhulumisaneni;
thola "amafomethi amaningi" abaxhumanisi bezingxoxo nganoma yisiphi isihloko;
uzokwazi "ukunakekela" umuntu ukuze uthole ubuhlobo bothando;
sebenzisa isikhathi sakho sokuphumula ngenzuzo, ethokozisayo, engavamile futhi ejabulisayo.
Qalai-roulette yengxoxo yevidiyonabafana nomaamantombazaneanoma yimuphi umsebenzi kanye neminyaka engu-100%mahhalafuthingaphandlekokubhalisaokungadingekileokwamanje.
Iyini i-chatroulette?13 Okthoba 2022, 20:41
Eminyakeni yamuva, lokho okubizwa ngokuthi izingxoxo ze-roulette zithole ukuthandwa okukhulu ku-inthanethi.Lolu uhlobo lwesevisi yokuqomisana ku-inthanethi, kodwa umehluko phakathi kwe-roulette yengxoxo kanye nesayithi evamile yokuphola ukuthi lapha umuntu akakhethi interlocutor.Isistimu ngokwayo ikhetha ngokungahleliwe i-interlocutor ngokusekelwe kuma-algorithms ayo okuhambisana nomsebenzisi.Umsebenzisi ngokwakhe angakhetha kuphela ubulili obufunayo kanye neminyaka ye-interlocutor yesikhathi esizayo.
Kukhona nezingxoxo zevidiyo ezisesidlangalaleni.Ukusakazwa kwengxoxo yevidiyo ye-roulette kuyatholakala kuwo wonke umuntu esizeni http://rt.ruletka-888.com/.Kukhona ukukhethwa okukhulu kozakwethu abahlukene bokuxhumana.Okwamanje, abantu abangaphezu kwe-1000 ababhalisiwe kusayithi, abazokujabulela ukuhlangana nomngane omusha.Ukuze kube lula kubasebenzisi, ngaphezu kwengxoxo evamile, ingxoxo yevidiyo nayo yadalwa ukuze abaxhumanisi babonane, futhi ukuxhumana kwakujabulisa futhi kukhululekile.
Isebenza kanjani i-chatroulette?
Bhalisa kusayithi bese ugcwalisa imininingwane yakho
Qala ingxoxo yevidiyo bese ulinda isistimu ukuthi ikukhethele u-interlocutor ozokhuluma nayo.
Xoxa ngendlela othanda ngayo, futhi uma ufuna ukukhuluma nomunye umuntu, vele uchofoze inkinobho ethi "okulandelayo" futhi isevisi izokhetha omunye uzakwethu wengxoxo.Lokhu kungenziwa izikhathi eziningi ezingapheli.Ngezinye izikhathi ama-interlocutors aphindaphindiwe, kodwa lokhu kwenzeka kancane kakhulu.
Ngokushesha ngemva kokubhalisa, kunconywa ukulanda uhlelo lokusebenza olukhethekile lweselula.Kulula kakhulu kunenguqulo ye-inthanethi yesayithi, njengoba uhlelo lokusebenza luklanywe ngokukhethekile futhi luhlolwe ukusebenza kumakhalekhukhwini.Ngaphezu kwalokho, ngosizo lohlelo lokusebenza lweselula, ungathola izaziso ezivela kubaxhumanisi ngqo esikrinini sefoni, ngakho awudingi ukuxoxa njalo futhi ulandele izibuyekezo.
Kufanele kuqashelwe zisuka nje ukuthi le nkonzo itholakala kuphela izakhamuzi esezifinyelele iminyaka engu-18.Kokunye, ukufinyelela kusevisi kuvinjiwe, njengoba kungase kube nokuqukethwe okungafunwa.Ungafunda kabanzi mayelana nemigomo yokusetshenziswa kwenkonzo kanye nemithetho yokuziphatha kwayo esigabeni "semigomo yokusetshenziswa".Ukuxhumana okuyimpumelelo!
Izivakashi ezithandekayo!Umsebenzi wesayithi udinga umzamo omkhulu, isikhathi kanye nezinsiza, ngakho-ke uma uthanda iphrojekthi yethu futhi ufuna ukuthi iqhubeke ikhona, ungenza umnikelo wakho ngendlela yomnikelo omncane.Ungenza umnikelo ekhadini le-Sberbank: 4817760251202287Sizojabula nganoma yiluphi usizo.Ngiyabonga!))
I-Chatroulette engcono kakhulu ku-inthanethi
Ingabe unesithukuthezi sokuxoxa ezinkundleni zokuxhumana, kodwa awukakazami ingxoxo okwamanje?Uyafuna ukubuka ama-webcams abukhoma futhi uxoxe nabantu bangempela?Khona-ke uzoyithanda ngempela le ndlela yokuxhumana kwe-inthanethi!
Leli ithuluzi elihle lamantombazane nabafana abathanda ukuthula kunezinkampani ezinomsindo.Emphakathini wanamuhla, kunabantu abaningi abangakwazi ukuqhuba inkhulumomphendvulwano nabantu abangabazi empilweni yangempela, kodwa ngesikhathi esifanayo babhekana nokuntuleka kokuxhumana futhi i-roulette yokuxoxa iklanyelwe ukulungisa lesi simo sezindaba.
Uma ubheka ngaphandle lesi sisetshenziswa sevidiyo, uyaqonda ukuthi kungani ibibizwa nge-roulette yengxoxo (amagama afanayo: i-roulette yengxoxo, i-ru roulette, i-roulette yengxoxo 18, i-roulette yengxoxo, i-roulette yengxoxo yesiRashiya).Phela, lokhu kujwayelana okuku-inthanethi kuhlanganisa izingxenye ezimbili: ingxoxo kanye nomdlalo odumile we-roulette.Kuphela yonke intshisekelo yalokhu kuphola okungajwayelekile ku-inthanethi ilele eqinisweni lokuthi lena ingxoxo yevidiyo!Okusho ukuthi, uhlangana no-interlocutor okungahleliwe ngokubheka, futhi uma ungamthandi, mane ucindezele inkinobho bese udlulela komunye ongamazi.
Le ngxoxo yevidiyo ithola ukuduma eYurophu (eNgilandi, eJalimane, eFrance, e-Italy, eSpain, eSwitzerland, njll.), e-USA (America), Mexico, China, kanye nasemazweni e-CIS (Russia, Ukraine, Belarus) .Lokhu akumangazi, ngoba lolu hlobo lwe-roulette yengxoxo luthakazelisa kakhulu.
Izigidi zabasebenzisi namuhla zibheka izingxoxo zengxoxo njengezingcono kakhulu futhi ezimweni eziningi ifomethi yokuxhumana elula kakhulu.Futhi lokhu kufakazela nakanjani ukuthi ukusetshenziswa kwabantu beminyaka ehlukene yezindlela zesimanje ze-inthanethi zokuqomisana nokuhlangana ngesikhathi sangempela kuyindlela enhle kakhulu yokuxhumana nabantu.
Wirt chat roulette - 1000 amantombazane nabafana bamagange ukuxoxa nawe
Akukhathalekile ukuthi umuntu ufuna nje ingxoxo emnandi nejabulisayo noma ufuna umlingani wobudlelwano obuqotho nobunzulu - ku-roulette yengxoxo namantombazane nabafana baseRussia, kanye nabangaphandle, wonke umuntu angahlangana nomngane ozinikele nothando. okwempilo yonke.
Abantu abaningi abakwazi ukumane bakhulume emgwaqweni nomuntu abamthandayo, futhi emsebenzini kufanele bahambisane nesithombe esamukelekayo.Zonke lezi zici zinqwabelana ku-subconscious futhi ziholela eqinisweni lokuthi umuntu uba yisithunjwa sokwesaba nokungaqondi kahle, kuyilapho i-roulette ibonakala njengendlela yodwa yokuphuma kulesi simo.
Ngakho-ke yini okufanele uyenze ezimweni ezinjalo?Indlela yokuqeda isizungu nokuthi ungatholaphi umuntu ongakwazi ukujabulela ukuxhumana naye kuphela, kodwa futhi umise ubuhlobo besikhathi eside?
Uma ucabangela amathuba angenamkhawulo wezindlela zesimanje zokuxhumana nge-inthanethi, akunakwenzeka ukukhohlwangezinzuzo ezi-5 ezingenakuphikwa zabasebenzisi be-roulette yokuxoxa:
Elula futhi esheshayo.Izingosi ze-roulette nezinhlelo zokusebenza emhlabeni zimahhala futhi ngokuvamile azidingi ukubhaliswa.Vele ucindezele inkinobho "qala", futhi uhlelo luzokukhethela umngane ngokuzenzakalelayo;
Abangane okungahleliwe.Abanye abantu engxoxweni yevidiyo banamahloni okuthatha isinyathelo sokuqala, bekholelwa ukuthi ngale ndlela bazobonakala bephoqelekile.Lapha ngeke wazi ukuthi uzoqhuba nobani inkhulumomphendvulwano.Uma ungene engxoxweni yevidiyo, uzobona umuntu ngakolunye uhlangothi lwesikrini naye ofuna abangani futhi ulungele ngokuphelele hhayi kuphela ukuxhumana, kodwa futhi nokusungula ukuxhumana okubonakalayo nomlaleli omangalisayo;
Kulula ukuhlangana futhi sivalelise.Uma uqonda kusukela emaminithini okuqala okuxhumana ukuthi i-interlocutor ayithakazelisi, noma uma eziphatha ngokungafanele, khona-ke ngaphandle kwencazelo noma ukuxolisa, cindezela inkinobho "elandelayo", futhi uzoshintshela kumlaleli omusha;
Umhlangano wenziwe ngekhamera yewebhu.Kule ngxoxo, ngaphandle kokulanda, ungabona ngokushesha futhi uzwe i-interlocutor, ephumelela kakhulu kunokuxhumana ezinkundleni zokuxhumana, lapho abasebenzisi bevame ukuthumela ulwazi olungahambisani neqiniso esikhundleni sesithombe sangempela.Ukujwayelana nekhamera yewebhu kulula kakhulu;
Ukuqeda isizungu nesithukuthezi.Akuwona wonke umuntu ongatshela izihlobo noma abangane ngokukhululekile ngezinkinga ezibuhlungu.Ekusakazweni kwe-roulette yezingxoxo awukwazi ukwabelana ngemicabango yakho nomngane omusha kuphela, kodwa futhi uthole umngane womshado onezimiso zempilo ezifanayo.
I-World Chatroulette - isayithi elingeke lishiye noma ubani engenandaba
Ngokuvamile amantombazane nabafana abafuna ukushintsha indlela yabo yokuphila baqala ukufuna abangane abasha ezinkundleni zokuxhumana, okungabaniki ngaso sonke isikhathi umphumela oyifunayo.Uma kuqhathaniswa ne-chatroulette, kunzima ukuthola abangani abasha lapho, ngoba awukwazi ukuqiniseka ngomunye umuntu.Inketho yesibili abantu abavame ukuyikhetha iwukuqomisana nge-inthanethi nabesifazane namadoda angempela, ayanda kakhulu nsuku zonke.
Ukuduma kwengxoxo yevidiyo ebukhoma yaseRussia kuyakhula ngenxa yezinzuzo eziningi eziyehlukanisa kunoma iyiphi enye inketho.Le ndlela engavamile yokuthola abantu abasha idonsa abafana namantombazane abaningi ngokwengeziwe ngesimo esithakazelisayo kanye nesici sokumangala, esikitaza izinzwa kamnandi futhi sinezela izinongo ekuphileni kwansuku zonke.
Into ethakazelisa kakhulu kukho konke lokhu ukuthi i-roulette yengxoxo esheshayo manje ayisizi nje kuphela abantu ukuthi bajabule futhi bazane, kodwa futhi iyasiza ekwakheni umndeni, kungakhathaliseki ukuthi i-paradoxical ingase izwakale kanjani.Ngenxa yalokhu, abasebenzisi abaningi abangabodwa abangasitholi isikhathi nethuba lokuthola umlingani wabo womphefumulo ejubaneni lempilo yesimanje bathola injabulo yabo.
I-Chatroulette esipheqululini - ukuphola nokuxhumana ngokuchofoza okukodwa
Ubuchwepheshe besimanje bushintsha umhlaba futhi buthuthukisa zonke izinhlobo zokuxhumana.Namuhla, ngenxa yengxoxo nabantu bakwamanye amazwe namaRussia, abantu bangaxoxa bodwa ngaphandle kokushiya amakhaya abo futhi bathole abantu abangabazi ngokungahleliwe ngokuchofoza okukodwa.Manje wonke umuntu angasebenzisa indawo lapho inani elikhulu labafana namantombazane lifuna ulwazi olusha futhi lifuna ukuchitha isikhathi nabangane abasha.
Ngaphezu kwalokho, i-roulette ethokozisayo kusiphequluli se-Yandex iyindlela yesimanje yokuthola abantu abasha, lapho yonke into inqunywa ngenhlanhla.Uma ukhathele umkhuba noma uzizwa unesizungu, sekuyisikhathi sokuthi ungene emkhathini othakazelisayo we-roulette yengxoxo yokudlala ngothando nabantu ongabazi nje.Ngikholwe, kunzima ukuthola indlela ethakazelisayo, futhi ngesikhathi esifanayo ephephile, yokuxhumana nomuntu wangempela.
Ngisho noma ungakaze uzame ukuxoxa namantombazane amahle, mhlawumbe uzwile ngendlela elula nethandwayo yokuhlangana nabantu abasha, ukwenza abangane ngisho nokwakha ubudlelwano bothando.Zama i-chatroulette ngekhamera futhi ubone ukuthi kulula kangakanani ukushintsha impilo yakho yansuku zonke futhi ube umuntu ojabule kakhudlwana.
Kungani i-roulette yesiRashiya idume kangaka?
Iqiniso liwukuthi i-chatroulette yenza kube nokwenzeka ukuba nesikhathi esimnandi.Nakhu okunikezwa yi-roulette yengxoxo yewebhu ekunakeni kwakho ngaphandle kokubhalisa futhi mahhala ngokuphelele:
Uma ungazi ukuthi ungaqunga kanjani isibindi sokuhlangana nabobulili obuhlukile ekuphileni kwansuku zonke, unethuba eliyingqayizivele lokusebenzisa ithuba lokujwayelana nje nomuntu ovamile kule ngxoxo yevidiyo.
I-Chatroulette izokusiza ukuthi uqale ingxoxo elula, kodwa ngesikhathi esifanayo ejabulisayo ne-interlocutor engahleliwe.
Umdlalo ojwayelekile we-roulette yokuxoxa, lapho uvele uhlale futhi upheqa phakathi kwabaxhumanisi abangahleliwe bese uqala ingxoxo nomuntu omthandayo.
Lapha ungakwazi ukwabelana ngezinto ozithandayo, kanye nokuthakasela i-interlocutor ngekhono lakho lokudlala isiginci, ukucula, njll.
Okungajwayelekile, kodwa kuyiqiniso: abanye baze bakwazi ukwenza iziphakamiso ku-chatroulette!- ukuqomisana namantombazane ngaphandle kokubhaliswa.
Yebo, lolu hlu lungaqhutshekwa ngokungapheli, ngoba imicabango yabantu ayipheli :)
I-Chatroulette yenze kwaba nokwenzeka ukuthi abantu baxoxe ngesikhathi sangempela nabantu abangabazi.Abantu abaningi abazi ngalokhu okwamanje, ngoba sekuvele kunama-analogue ambalwa e-roulette yengxoxo (i-Ru roulette, i-roulette yengxoxo yesiRashiya, njll.).
I-KuMit chat - i-roulette yevidiyo eyi-premium yokuqomisana namantombazane ku-inthanethi
Umhlaba ushintsha ngokushesha kunokuba sinesikhathi sokuwuqaphela.Kuvela ubungcweti obusha futhi obudala budlulela esikhathini esedlule, i-inthanethi ingangena esikhundleni sesikole, inyuvesi noma izifundo zemfundo, futhi izinkundla zokuxhumana kanye nezithunywa ezisheshayo seziyingxenye ebalulekile yempilo cishe yanoma yisiphi isikhathi samanje.
Kodwa kukhona okuthile kule-whirlpool okuhlale kungashintshile iminyaka eyinkulungwane.Lesi isidingo somunye nomunye wethu ekukhulumisaneni, ukufuna abangane beqiniso kanye nomlingani womphefumulo.Isiphetho sihlala sinjalo, kuphela izindlela zokusifinyelela ziyashintsha.
Elinye lalawa mathuluzi izingxoxo zevidiyo eziku-inthanethi.Sekuyifomethi ethandwa kakhulu iminyaka engaphezu kweshumi manje.Nakuba kufanele kushiwo ukuthi akuzona zonke izingxoxo zewebhu zesimanje ezihlangabezana nezindinganiso nezimfuneko zamanje.Ama-chatroulette amaningi awakwazi ukuziqhayisa ngokulinganisela okuhle, izethameli ezikhuthele, noma ukusetshenziswa kalula.Nokho, kusekhona okuhlukile.Enye yazo yingxoxo yevidiyo yaseRussia i-CooMeet.Lena inkundla ekahle yokuxhumana nabobulili obuhlukile, ukuphola okungajwayelekile kanye nokuthola umaqondana.Futhi ukulinganisela okuhle kakhulu nomsebenzi ongenasici kwenza le ngxoxo yevidiyo namantombazane ibe enye yezinhle kakhulu zohlobo lwayo.
I-KuMit Chat Premium
Ingxoxo yevidiyo ye-CooMeet Premium iyisevisi ehlala ithuthukiswa futhi ithuthukiswa ukuze ibe ehamba phambili phakathi kwezingxoxo zekhamera yewebhu.Futhi lokhu, yiqiniso, kudinga uxhaso.Singalahla isayithi ngezikhangiso kanye nezibhengezo ezizivelelayo ngesikhathi socingo ukuze senze inzuzo ngakho.Kodwa kungaba okungalungile maqondana nabasebenzisi.
Ngakho-ke, i-CooMeet Premium yethulwa, okuyinto ngemali encane ikuvumela ukuba ujabulele zonke izinzuzo nezici zesayithi.Lokhu kwenze kwaba nokwenzeka ukudala isevisi yekhwalithi ephezulu ngempela:
izinga eliphezulu lokuvikeleka nokugcinwa kuyimfihlo;
ukulinganisela okuphelele 24/7;
ukungabi khona okuphelele kwe-bots nama-fakes kusayithi;
ividiyo enhle njalo nekhwalithi yomsindo;
amathuluzi alula okuthola abaxhumanisi abafanelekile.
Okuhle kunakho konke, ungasebenzisa i-CooMeet mahhala ngesikhathi sesivivinyo.Kulokhu, uzokwazi ukufinyelela yonke imisebenzi kanye namathuba wokuxoxa ngevidiyo nabantu ongabazi.Futhi kakade ekupheleni kwesikhathi samahhala, wena ngokwakho unquma ukuthi uthenge ukufinyelela kwe-premium noma cha.Kodwa awukwazi ngisho nokungabaza - uzoyithanda!
Amaphutha lapho usesha i-roulette yengxoxo KuMit
Iphutha elikhulu wubudedengu lapho ufaka igama lengxoxo ye-CooMeet.Isibonelo, kukhona ama-typos anjalo: inkanyezi enomsila, i-coomet, i-coo meet, i-coomeet, i-coomee, i-coomate, i-commet, i-coomeeet, i-coomet, i-coomet, i-comet chat nokunye okunjalo.Iyini ingozi?
Ezimweni eziningi, ngeke nje uthole isayithi ekusesheni, kodwa i-Google izoqonda ukuthi usho ukuthini futhi ikunikeze isixhumanisi esifanele.Kodwa esimweni esibi kakhulu, uzifaka engcupheni yokufika esizeni sabakhwabanisi abasebenzisa igama elifana nele-CooMeet ku-inthanethi.Kulapho-ke izinkinga ezinkulu zingaqala khona.
Iseluleko!Hlola ikheli lewebhusayithi ye-CooMeet ngokwezwi nezwi lipela ngohlamvu.Ngokufanayo, bheka ngokucophelela uhlelo lokusebenza lwengxoxo ye-inthanethi ye-CooMeet ezitolo ze-iOS noma ze-Android.
Khumbula ukuthi i-CooMeet akuyona nje i-roulette yengxoxo yesiRashiya.Inkundla yethu isebenza emazweni amaningi amakhulu emhlabeni.Ungakhetha izwe lakho khona kanye esizeni ezansi - isiza sizovezwa ngokushesha ngolimi olufanele ukuze kube lula kuwe.
Ungaqala kanjani ukusebenzisa ingxoxo yevidiyo?
Konke kulula kakhulu:
1. Uya kuwebhusayithi ye-CooMeet bese uchofoza inkinobho ukuze uqale ingxoxo.
2. Cacisa ubulili bakho futhi uvumelane Nenqubomgomo Yobumfihlo.
3. Nikeza isayithi ukufinyelela kukhamera yakho yewebhu nemakrofoni, bese uqala ukuxoxa nabasebenzisi abangahleliwe.
Uma lesi yisikhathi sakho sokuqala kusayithi, uhlelo luzokunikeza ukuthi ubhalise futhi uthole imizuzu yamahhala yokuxoxa namantombazane ku-roulette yengxoxo.Sikweluleka ukuthi usebenzise leli bhonasi elihle.
Ngendlela, kuzilungiselelo zengxoxo ungakhetha ukuthi uthanda ukuxhumana kanjani - ngevidiyo noma ngengxoxo yombhalo.Ebhulokhini elithi "Imilayezo", ungaphinda uxhumane nosekelo lobuchwepheshe ngokuqondile futhi uthole usizo ngomsebenzi wakho.
Uma ukuxhumana nomuntu othile kungahlangani, ungashintshela kokulandelayo ngokuchofoza okukodwa nje.Ngakho-ke, ngobusuku obubodwa nje ungahlangana nabantu abaningi abathakazelisayo, thola abangane abahle ngisho nomngane womshado.Hlangana, xoxa nganoma yisiphi isihloko, hlela umhlangano empilweni yangempela futhi uqale ubuhlobo obusha ngaphandle kokulibala!
Amathiphu Okusebenzisa Ingxoxo Yevidiyo Engahleliwe
Yiba nesizotha futhi ubekezele, ungabi luhlaza kulabo okuxoxa nabo futhi uziphathe ngendlela efanele kubo.Lena imithetho eyisisekelo kakhulu yokuxhumana hhayi kuphela ku-chatroulette ye-intanethi, kodwa ngokujwayelekile ku-intanethi.Kodwa kukhona amathiphu ambalwa awusizo ngokukhethekile ekukhulumisaneni ku-chatroulette online:
1. Setha ikhamera yakho yewebhu nokukhanyisa.Qiniseka ukuthi isithombe esivela kukhamera yakho sicacile, nokuthi siqondiswe kuwe ngqo, hhayi etafuleni noma kwenye indawo.
2. Nakekela ikhwalithi yomsindo.Umbhobho omubi ungonakalisa konke ukuxhumana.Uma umsindo ovela kuwo usezingeni eliphansi, kungcono ukuthenga entsha.Ngisho nemodeli yesabelomali izokwenza.
3. Bika abasebenzisi abephula izinqubomgomo ze-CooMeet.Sizama ukuqapha ukuziphatha okungamukelekile futhi sinqabele abephula umthetho ngesikhathi esifanele.Kodwa ngosizo lwakho, inqubo yokulinganisa iyashesha futhi isebenza kahle kakhulu.
4. Ngaphambi kokuqala ukuxhumana, beka izinto ngokuhlelekile eduze kwakho - ngale ndlela uzobukeka ucocekile futhi ucocekile emehlweni oxhumano.Chitha imizuzu emi-5 ukuhlanza - ngeke uzisole.
5. Phakathi nengxoxo, zama ukungabheki esikrinini kuphela, kodwa futhi nakukhamera yewebhu.Ngakho-ke i-interlocutor izoba nomuzwa wokuthi ubheka iso ngeso.Lokhu kusiza ukwenza ukuxhumana okungcono.
Futhi okubaluleke kakhulu, sebenzisa i-CooMeet chatrandom ngentokozo, xhumana, thola abantu abathokozisayo futhi uhlale unethemba.Lona umthetho oyinhloko wempumelelo kunoma iyiphi i-chatroulette!
Ungafunda kabanzi mayelana nendlela i-Chatroulette esebenza ngayo ku-inthanethi ngokulandela isixhumanisi esikuwebhusayithi.
Ingxoxo inesixhumi esibonakalayo esihle.Isizindalwazi siqukethe inani elikhulu lababhalisile.Kodwa akudingekile ukuba ufune olungile phakathi kwabo.Ingxoxo izokukhethela lowo ozoxoxa naye.Ukuxhumana ngekhamera kuzokunikeza ithuba lokusondela kumuntu ongahleliwe.Uhlobo lwesipiliyoni ozoluthola, awusoze walukhohlwa.Ungakwazi ukutshela interlocutor yakho okuthile okuthakazelisayo ngawe noma ufunde okuningi ngaye.I-Chatroulette izokunikeza ithuba lokususa izakhiwo futhi ube umuntu ovuleleke kakhudlwana.
Isevisi idlule ezikhathini zokukhuphuka okungajwayelekile kanye nokuwa okudabukisayo, futhi isadume kakhulu emkhakheni wayo.Uhlangothi olubuthakathaka kwakuwukuntuleka, empeleni, ukulawula komsebenzisi, ngenxa yokuthi ngezikhathi ezithile izinzuzo ze-anatomical "ziphuma" engxoxweni esikhundleni sobuso babaxhumanisi, okungebona wonke umuntu othanda.
Ngokuvamile, umsebenzisi osebenzayo wefoni ephathekayo uxhumana nabangane bakhe, umndeni, nozakwabo okungenani ngezithunywa ezisheshayo ezimbalwa, izinkundla zokuxhumana ezimbalwa.amanethiwekhi futhi uyisivakashi okungenani inkundla eyodwa, ngisho noma kwenzeka ngenxa yesidingo.Uma sikhuluma ngezinkundla, uma manje ususa amehlo akho esiphakamisweni sokuthi uzisebenzise, ​​khumbula izinsiza ezinkulu ezinama-terabyte wokuqukethwe kwemidiya, ngenxa yokuthi ubugebengu bube nencazelo ehluke ngokuphelele.
Uma ufuna ukuthola abangani abasha noma nje ukuzijabulisa, kufanele uvakashele Chat Roulette.Ukuhluka kwale ngxoxo kulele eqinisweni lokuthi awumkhethi lowo okhuluma naye ngokwakho.Uhlelo lukhetha ngokungahleliwe uzakwethu ozoxhumana naye.Lokhu kubhebhezela isithakazelo, ngoba ngaso sonke isikhathi kufanele uxhumane nabantu abasha.Lolu hlobo lokuxhumana lujabulisa ingqondo futhi luvuse isithakazelo.
Ukuxhumana ku-Chat Roulette kuvumela abantu ukuthi basheshe bazivumelanise nezimo ezintsha, bazikhulule.Ngisho nabaxhumanisi abanamahloni kakhulu baqala ukuxhumana ngokukhululekile nabantu abangabazi.I-Chat Roulette ayifani nezinye izingosi zengevu eziningi.Ngemuva kwakho konke, i-interlocutor ekhethwe ngokungahleliwe ingashintsha kakhulu impilo yakho futhi ikunikeze ulwandle lwemizwelo.Le ngxoxo yevidiyo imahhala.
Okudingayo ukuze uxhumane kule ngxoxo ikhompuyutha ne-inthanethi eshesha kakhulu.Abantu bangempela babamba iqhaza ezingxoxweni, akukho nkohliso lapha.Yingakho abahlanganyeli bengxoxo behlala belindele okujabulisayo.Bonke engibaziyo ezithakazelisayo kakhulu njalo kwenzeka ngenhlanhla, yingakho abantu bekhetha ChatRoulette.Ungakwazi ukwenza abangani abasha noma uthole uthando lwakho.
Qiniseka ukuthi ukuxhumana ku-Chat Roulette ngeke kukushiye ungenandaba.Uma ukhathele ukuphila kwansuku zonke futhi ufuna okuhlangenwe nakho okusha, i-Chatroulette ingeyakho.
Isikhathi ngasinye ngaphambi kokuqala kokuxhumana, uzobe ulindele okujabulisayo ukuthi yiluphi uhlobo lwe-interlocutor ozohlangana nalo.Mhlawumbe namuhla kuzodingeka ukhulume nentombazane enhle, futhi kusasa ingxoxo izokukhethela umfana ojabule othanda ukuhamba futhi uzokutshela izinto eziningi ezintsha nezithakazelisayo mayelana namazwe akude.I-Chatroulette iyindlela enhle yokuhlenga e-melancholy nesithukuthezi.
Ngokushesha nje lapho i-interlocutor yakho ivela esikrinini, uzokhohlwa ukuthi ukukhetha kwenziwa ngenhlanhla.Ibanga lizosulwa, futhi uzoqala ukuxhumana nge-wavelength efanayo.
I-Chatroulette iyisevisi eyingqayizivele yokuxhumana okungaziwa nabantu emhlabeni jikelele.Uzoba nenani elikhulu labasebenzisi onawo, abafana nawe, abafuna ukwenza abangani abasha noma bavele bathulule umphefumulo wabo komunye umuntu.Uhlelo lokusebenza lunokuvikelwa okuthembekile, ukuze kungabikho noyedwa kwabaxoxisana naye ozokwazi ukuthola idatha yakho, indawo noma olunye ulwazi lomuntu siqu.
Muva nje, abantu abaningi bakhetha ukujwayelana nezingosi ezikhethekile noma ngezingosi zokuxhumana.Kodwa inkinga ngamasevisi anjalo ukuthi ukubhaliswa kuyadingeka lapho, kanye nokubekwa kwedatha yakho, njengendawo, ubudala, imfundo, njalonjalo.Akuwona wonke umsebenzisi ofuna ukwabelana ngolwazi lomuntu siqu olunjalo, ngoba ngezinye izikhathi lungalimaza kakhulu.
Uhlelo lokusebenza lwe-Chatroulette lunikeza izingeniso ithuba eliyingqayizivele lokuthola abangani nokuxhumana ngaphandle kokwesaba indawo yabo siqu.Le ngxoxo igadwa omengameli ubusuku nemini, ngakho-ke uma kwenzeka ukuziphatha okungathandeki komuntu okhulumisana naye, ungakhononda ngaye futhi abalawuli bazovala ikhasi lakhe.
Ukuze usebenzise isevisi, awudingi ngisho nokubhalisa noma uvule i-akhawunti yakho.Vele ucindezele "qala" futhi uqale ukucinga interlocutors.Ingxoxo ikhuluma isiRashiya ngokuphelele, kodwa isebenza ngaphandle kwezinkinga kuwo wonke amazwe omhlaba.Uzokwazi ukuthola abangani abakhuluma ulimi lwakho bese uqala ukuxoxa ngokushesha.
Ama-interlocutors angakhethwa ngokungahleliwe.Uma ngokuzumayo ukuxhumana kufinyelele esizindeni noma umane nje ungamthandi lo muntu, azikho izincazelo kanye nokuthula okungakahleleki okudingekayo.Vele uqedele ingxoxo naye ngokuchofoza inkinobho ethi "Okulandelayo".Engxoxweni, ungasebenzisa ikhamera yewebhu nemakrofoni, noma uvele uxoxe ngemilayezo.
Le ngxoxo akusona nje isithunywa esijwayelekile.Ngenxa yakhe, uzokwazi ukuhlangana nabantu abahlukile nabamangalisayo abavela kuwo wonke umhlaba.Lapha awukwazi ukubhala noma ukukhuluma kuphela, kodwa futhi wabelane ngamathalenta akho namakhono angavamile.Vele uskrole ohlwini lwabasebenzisi abatholakalayo uze uhlangane nento ethokozisayo nebalulekile.
Ukwenza isithombe sakho sikhanye futhi singalibaleki ekuboneni kwakho kokuqala, cabanga ngayo yonke imininingwane kusengaphambili.Kuvele phambi kwabaxhumanisi bakho ngendlela engavamile, uthatha incwadi oyikhonzile, ithoyizi elithambile noma nje isilwane esifuywayo.Ngakho-ke ungakwazi ngokushesha ukwenza umbono olungile, futhi uthole abantu bangempela abanomqondo ofanayo phakathi kwabasebenzisi abayisigidi.
Siyakwamukela ku-Chatroulette!Ingxoxo yethu yevidiyo engaziwa ivakashelwa nsuku zonke ngabasebenzisi abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-200.Phakathi kwabo, ngokuqinisekile uzothola umngane omthandayo.
Lena isevisi yemiyalezo yevidiyo, ingxoxo yevidiyo engaziwa lapho ungaxoxa khona nabantu abavela kuwo wonke umhlaba usebenzisa ikhamera yakho yewebhu.Vele ucindezele inkinobho ethi "Qala", futhi ingxoxo izokhethela isikhulumi esingahleliwe phakathi kwamakhulu ezinkulungwane zabasebenzisi.Ngeke wazi muntu interlocutor yakho, nalapho uvela.Kodwa okuthakazelisayo nakakhulu - ungakwazi njalo ukwazana phakathi nengxoxo futhi uthole izithakazelo ezifanayo.Uma ngasizathu simbe ungathandi i-interlocutor, vele uchofoze "Okulandelayo" bese uqhubekela kokulandelayo.Asikho isidingo sokuvalelisa, ukuxolisa noma ukubeka izaba.
Lutho neze!Ingxoxo yethu MAHHALA, ayaziwa futhi ayidingi ukubhaliswa okuyinkimbinkimbi.Asikho isidingo sokusungula nokukhumbula ukungena ngemvume namaphasiwedi, uqinisekise i-imeyili noma inombolo yocingo.
Siyakuhlonipha ukungaziwa kwabasebenzisi bethu: umkhulumeli wakho ngeke alazi igama lakho noma ukuthi uvelaphi, ngaphandle uma ukhetha ukwabelana naye lolu lwazi.Akudingekile ukuba ubekezelele ukuziphatha okudelelayo noma okucasulayo komuntu oxoxa naye.Uma ephula imithetho yengxoxo yethu noma umthetho, ungahlala ukhalaza kumongameli, ozocabangela isikhalazo sakho futhi avimbe umephuli.
Yini oyidingayo ukuze uqale ukuxoxa?
I-inthanethi, ikhamera yewebhu nomoya omuhle.Kodwa ngisho noma ungenayo ikhamera yewebhu, akunandaba, imakrofoni izokwanela, noma ungasebenzisa ingxoxo yombhalo efasiteleni elingakwesokudla.Kodwa-ke, khumbula ukuthi abantu beza engxoxweni yevidiyo ngokuyinhloko ukuze babone umxhumanisi, ngakho ikhamera ngeke ibe yinto engafanele.
Ubani ozongixhumanisa naye?
Lapha kuzodingeka uthembele entandweni ye-His Majesty Chance.Uma ungathandi eyodwa interlocutor, ungakwazi njalo uqhubekele olandelayo.I-Chatroulette iyingxoxo yevidiyo enkulu kunazo zonke abasebenzisi bayo abakhuluma isi-Russian, ngakho-ke akudingekile ukuthi ukhumbule imishwana evela ebhukwini lemisho lesiNgisi - bayakuqonda lapha!
Indlela yokwenza abangane engxoxweni?
Kulula njengophaya!Qala ingxoxo ngokucindezela inkinobho ethi "Qala", mamatheka bese uthi "Sawubona!".Ungalindi isinyathelo esivela ku-interlocutor, sibonise kuqala.Sonke sinamahloni okuqalisa ingxoxo, kodwa ngemva kokuthatha isinyathelo sokuqala, siyaqonda ukuthi sasesaba ngokuphelele ize.Khumbula: wonke umuntu uyalingana engxoxweni.Bonke abasebenzisi bethu balapha ngenjongo efanayo neyakho - ukuchitha amahora ambalwa, ukuhlangana nabantu abathakazelisayo futhi uthole ingxenye yesimo senhliziyo esihle.Inhlanhla ekuxhumaneni nasekujwayeleni okuhle!
I-Chatroulette KuMit - hlangana namantombazane kukhamera yewebhu
Ingabe ufuna indlela esheshayo yokuhlangana nentombazane ehlakaniphile nenhle?I-roulette yengxoxo yewebhu i-CooMeet (inguqulo yesiNgisi ye-CooMeet) ikuvumela ukuthi uxhumane nobulili obulungile abavela emazweni ahlukene ngaphandle kokushiya ikhaya lakho.Uxhumano olusheshayo, ukushaya kwevidiyo kwekhwalithi ephezulu, akukho ukucindezelwa kanye nabaxhumanisi abangcono kakhulu abazohlala behlangana nawe ngokumamatheka.
Siyazi ukuthi isikhathi sibaluleke kangakanani namuhla: sihlala siphoqeleka ukuthi sibeke phambili, songe futhi siphuthume, futhi asinaso isikhathi sokwenza konke ebesikuhlelile.Kulesi siphithiphithi, ukuqomisana nobudlelwano kuvame ukuthatha indawo engemuva.Iwebhusayithi esemthethweni ye-KuMit iqinisekisa ukuxhumana okuphezulu kuphela namantombazane athembekile - imihlangano ye-inthanethi, abantu obajwayele kanye nomoya omuhle.
Ukuchofoza kanye nje - futhi isistimu yethu yokukhetha ehlakaniphile izokuxhumanisa nezinkulungwane zabantu ongabazi abahle.Qiniseka ukuthi wonke amantombazane eze lapha ukuze ahlangane, axoxe futhi akhe ubudlelwano.Ayikho isevisi yamahhala enganikeza izinga eliphezulu lesevisi njenge-KuMit Chat:
ukuhlola ngesandla kwentombazane ngayinye ebhalisiwe;
ukuxazululwa ngokushesha kwanoma yiziphi izingxabano;
unswinyo olufanele ngokuphulwa ngakunye kwemithetho ye-chatroulette;
ukuthuthukiswa okuqhubekayo kanye nokwenza ngcono ukusebenza kwesayithi.
Okungcono Kakhulu ku-Omegle ne-ChatRoulette
Wonke umuntu owayenentshisekelo kuma-roulette aku-inthanethi cishe uyazikhumbula lezo zingxoxo ezazimi emsuka wokuxhumana okungahleliwe.Lokhu bekuyi-Omegle ne-ChatRulet, evele emuva ngo-2022.Owokuqala weza kithi evela phesheya, owesibili - ingqondo yesikole Russian Andrei Ternovsky.
Zombili izingxoxo zewebhu bezisekelwe kumgomo ofanayo: ukuxhumana nabaxhumanisi abangahleliwe abavela kuwo wonke umhlaba.Futhi nakuba u-Omegle eqale izinyanga ezimbalwa, kwakuyi-ChatRoulette eyabusa isikhathi eside.Nokho, kokubili izingxoxo ezingahleliwe ekugcineni zibhekane “nesifo” esifanayo, okuseyinkinga futhi exosha abaningi ekusebenziseni kwabo.
Lokhu, kunjalo, kumayelana nokuqukethwe okungalungile.Ezweni elikahle, abantu abaqondile nabanobungane abafuna ukwazana, ukuxhumana, nokunikezana umoya omuhle kufanele bangene ku-roulette yevidiyo.Empeleni:
ngokuvamile uhlangana nababonisi abafuna ukukhombisa izimfanelo zabo ezinhle kumuntu oxoxa naye ngokungahleliwe;
intombazane enhle ingase ibe ummeleli womsebenzi omdala ohlinzeka ngezinsizakalo eziseduze;
ukuxhumana okulandelayo kuzokunikeza ithuba lokujabulela isithombe esimile noma ividiyo enokuqukethwe kokukhangisa kuphela.Yebo, awukwazi ukuphika ukucabanga kwabantu be-PR.
Khona-ke kwaba sobala ukuthi kwakudingeka enye indlela efanelekayo - ingxoxo yevidiyo engahleliwe, engena lapho ungeke ukhathazeke ngokuthi ubani ozoba ngakolunye uhlangothi lwesikrini.Futhi ephambili phakathi kwezingxoxo zevidiyo ezithuthukisiwe yi-KuMit.
Kwakuyisilinganiso sabahlanganyeli kanye nezinyathelo ezifike ngesikhathi ezithathwe ngokuphulwa ngakunye okwaba yisixazululo senkinga ebuhlungu yezinsizakalo ezifanayo.Kusukela ekuqaleni, sasiqaphela ngokucacile ukuthi kwakungenakwenzeka ukubala ekuzishintsheni okuphelele kwale nqubo - sidinga isevisi yabantu yekhwalithi ephezulu ukuze abasebenzisi baqonde izinzuzo nezinzuzo zesayithi abalisebenzisayo.Nemizamo yaba nezithelo.
Namuhla - i-KuMit ingenye yezingxoxo zewebhu ezisezingeni eliphezulu neziphephe kakhulu.Futhi noma ubani angakuqinisekisa lokhu.Vele uchofoze "Qala Ukusesha" bese uzama i-roulette eku-inthanethi namantombazane.
Amantombazane amahle kakhulu Russian online
Ukuthola uthando nokwakha ubudlelwano sekulula kakhulu kusukela izinsiza zokuphola zaqala ukuthuthuka ku-inthanethi.Futhi i-chatroulette isibe yithuluzi elihle lalezi zinhloso, ukujoyina amanethiwekhi omphakathi kanye nezingosi zokuphola.Kodwa ngokungafani nalezi ezimbili zokugcina, kusengxoxweni yevidiyo lapho ungabona khona amehlo omuntu oxoxa naye okhangayo, ukumamatheka kwakhe futhi uzwe imizwelo engachazeki uma useduze ngisho nokuba kude kwamakhulu amakhilomitha.
Usangabaza?Xhuma mahhala futhi uqale ukuxoxa namantombazane engxoxweni yethu yevidiyo engahleliwe njengamanje ngaphandle kokubhalisa nokugcwalisa iphrofayili.Udinga kuphela ikhamera yewebhu ukuze uqale ingxoxo yevidiyo ye-KuMit.Futhi uma ngokuzumayo i-interlocutor ingekho ekunambithekeni kwakho - shintshela kumuntu ongamazi omusha ngokucindezela inkinobho eyodwa.Amantombazane avela emhlabeni wonke asevele ekulindele!
Ungangenelela kanjani engxoxweni yomunye umuntu ukwenza imigilingwane enjengeye
Sawubona mngane othandekayo, namuhla ngizokutshela imfihlo eyodwa encane ukuthi abaningi be-chatroulette prankersbafihla , futhi othile ucela le mfihlo ababhalisile abayizinkulungwane ezimbalwa(ababhalisile),kodwa nginqume ukwabelana ngalolu lwazi olubalulekile mahhala ikakhulukazi kuwe.
Ngifuna ukukucacisela khona manjalo:Eqinisweni, ngeke sibe nokugebenga, cha cha!awujahi ukushiya ikhasi, kodwa funda ngokucophelela, empeleni ngeke sigebenga, kodwa sidlulisele izixhumi ezimbili komunye nomunye.Okokuqala udinga ukulungiselela
Lokhu kungenziwa, yiqiniso, ngendlela ehlukile, kodwa ngizoyibonisa ngisebenzisa isibonelo se-OBS - Studio
I-VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:Voicemeter virtual cable
Iziphequluli ezimbili: Isibonelo, i-Google Chrome ne-Opera (Kudingeka ukhethe lezo ziphequluli ezingasebenza ngengxoxo)
Uma ufaka ikhamera ye-virtual obs, kubalulekile ukufaka amakhamera angu-4 (yize 2 kuphela azodingeka) amakhamera angu-2 ngaphezulu angase abe usizo ngenxa yesinye isizathu.
Ngokwemithetho ye-Chatroulette, kwenqatshelwe ngempela ukusebenzisa ama-emulators ekhamera yewebhu, futhi i-Chatroulette ilwa ngempela nalokhu, kuhlanganise nokuvinjelwa kwe-akhawunti (Qaphela), kodwa singabaduni, akunjalo?sidinga ukwenza isiqiniseko sokuthi ikhamera yethu ebonakalayo ibonwa njengeyangempela ebonakalayo, sizokwenza amaqhinga amancane nawe kumhleli wokubhalisa.
Ngakho-ke, ukuze uvule lo mhleli wokubhalisa (regedit) udinga amalungelo omlawuli wesistimu, ngaphandle kwalokho izinguquko ezenziwe ngeke zenziwe nganoma iyiphi indlela ngisho nangemva kokuqala kabusha ikhompyutha.
Singena kumhleli wokubhalisa: Izinkinobho zeWin + R zizovula iwindi lapho sibhala khona i-regedit bese siyenza, noma kube lula nakakhulu emkhakheni wokusesha (thola izinhlelo namafayela), vele ubhale regedit bese uchofoza isinqamuleli.
Kumhleli wokubhalisa: Sidinga ukuthola i-OBS - Virtual (ungasusa wonke amafolda noma ushintshe igama lawo, isibonelo, ku-Mycamera) Okulandelayo, sidinga ukuthola ikhamera yethu ye-OBS 1/2/3/4 kusihleli sokubhalisa futhi shintsha igama labo libe elethu, isibonelo OLDcamera1 njll.Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi wenzani!uma kungenjalo uzifaka engcupheni yokonakalisa okufakiwe kokubhalisa futhi kudingeke ukuthi uphinde ufake amakhamera ethu.
Uma wenze konke ngendlela efanele, khona-ke ngemva kokuqala kabusha ingxoxo esipheqululini, ngezansi kuzoba nokukhethwa kwamakhamera ethu nemakrofoni.Uma esipheqululini unikeze ukufinyelela kwekhamera nemakrofoni.
Uma ngemuva kwakho konke ukukhohlisa ungenayo ikhamera ebonakalayo ku-chatroulette, khona-ke wenza okuthile okungalungile: ngokomzimba, ngakho-ke kufanele kususwe lapho!Into ewukuthi i-chatroulette (yebo, ungamangali) ine-algorithm yokukhetha ikhamera enokubaluleka okuphezulu, okungukuthi, ikhamera yakho yewebhu yangempela inokubaluleka okuphezulu kakhulu ku-chatroulette ngakho-ke akufanele ibe kusiphequluli.
Okubalulekile!udinga ukungena ku-chatroulette ngaphansi kwama-akhawunti ahlukene:Zombili iziphequluli akufanele zidlulelane
Ukuze ugweme amaphutha: I-Chatroulette ivuliwe kwelinye iwindi/isiphequluli, futhi sidinga iziphequluli ezimbili nama-akhawunti amabili (vk/fb)
Uma ungenayo i-akhawunti noma ungafuni ukuthola ukuvinjelwa kokuyinhloko, khona-ke ngikweluleka ukuthiuthenge inombolo, uthenge izinombolo, futhi udale ama-fakes amabili - lokhu kuyadingeka!ukugunyazwa ku-chatroulette kuphela nge-VKontakte noma i-Facebook
Nokho, kubonakala sengathi izigaba ezinzima sezidlulile:Sekuyisikhathi sokusetha i-obs yeziphequluli zethu, ukuze u-trolling ku-chatroulette: Vula i-obs yethu bese udala indawo yesiphequluli sokuqala kukholamu yesehlakalo (ake sisho isiphequluli sokuqala, isibonelo. , khona lapho kukholamu yesehlakalo, chofoza isigcawu esidaliwe - > izihlungi -> ikhamera ebonakalayo -> khetha ikhamera yokuqala, bese ungakhohlwa ukucindezela ukuqala!Kungenjalo, esipheqululini sokuqala ku-roulette yengxoxo ekhamera yokuqala. ngeke kube khona lutho ngaphandle kwewindi lokuqala le-roulette yengxoxo ngokwayo.
Shayela amakhamera ezihlungi ngamagama awo afaneleukuze ungadideki ukuthi yini futhi kuphi: Isibonelo(Ikhamera ebonakalayo engu-1 chrome)manje efasiteleni lomthombo le-OBS yethu eyethulwe okokuqala udinga ukukhetha ukuthwebula kwewindi (sizothwebula iwindi 1) yesiphequluli sethu nge-roulette yethu yokuxoxa.
Amanye amathebhu kufanele avaliwe ukuze okweqile kungangeni emoyeni.Ngemva kokusetha imithombo namakhamera, vula i-roulette yengxoxo (Ngena ngemvume nge-akhawunti ye-VK / FB) khetha ikhamera yethu yokuqala efasiteleni lokukhetha i-roulette yengxoxo - njengoba yethulwa ku-OBS yethu yokuqala Ake sibheke ukuthi yini esinayo.
Kuyadingeka ukuthi uthwebule iwindi nge-chat-roulette!amanye amathebhu angase afakwe kuzimele uma engavaliwe
Manje kuma-obs okuqala efasiteleni lemithombo, sidinga ukunqampuna (sinqampune) ukuze esipheqululini sethu sokuqala esivulwe ikhamera, kube nesikwele esisodwa kuphela se-roulette empunga ngaphandle kwezilawuli.Lapha kufanele uqaphele futhi uqiniseke ukuthi ayikho imigqa emnyama ephumayo, ngaphandle kwalokho i-prank yethu izoshisa.
Lapha, zonke izilungiselelo zokunqampuna ngazinye zincike ekutheni uzibeke kanjani iziphequluli ezimbili kwesinye.
Manje sibona isithombe sethu ngendlela efanele!kufanele yelulwe ngokucophelela, kodwa hhayi ngesisindo sesikrini sohlelo lwe-OBS, kodwa ukuze singalali nale khamera, okungukuthi, ukuze i-roulette yengxoxo ibe nesikwele sayo esimpunga ngaphandle kwemigoqo emnyama emaphethelweni.
Futhi kuzilungiselelo lapho unqampuna -> udinga ukwenza izinguquko -> flip uvundlile uma ungakwenzi, kuzoba nohlobo oluthile lomphumela wokubukisa futhi lokhu kuzosinika u-100%
Uma wenze njengoba ngibhala kuwe lapha: Khona-ke kufanele uthole okuthile okufana nezithombe-skrini zami.
I-Lifehack lapho welula isithombe ku-obs,uma ubambe inkinobho ethiShift, bese welula kancane kancane, futhi ngokubamba i-alt nokwelula, uzonqampuna ifremu ngaphandle kokwelula isithombe.Ngaleli qhinga, ungazama ukususa okweqile kuhlaka.Nakulokhu, qaphela lapho welula, zama ukwenza kube bushelelezi ukuze umuntu ohlakaniphe angagxili kakhulu futhi anganweli kakhulu, njengokungathi, incazelo yegolide.
INTO EBALULEKE KAKHULU!kukho kokubili obs, sidinga futhi ukumisa omunye umthombo, kungaba ikhamera yakho yewebhu yangempela noma ividiyo, noma uhlobo oluthile lokumemeza bese usetha ukushintsha kwesigcawu ukuze kwenzeke ngokushesha.
Kumelwe siphinde izinyathelo ezifanayo esipheqululini sesibili naku-obs yesibili njengakwesokuqala, kuphela ngokukhetha ikhamera yesibili ye-obs esivele isendaweni yesehlakalo.Ngakho-ke, sifinyelela ekudluliseleni ama-interlocutors!Ubani ozocabanga ukuthi bashaye umuntu ngephutha, kodwa empeleni ulawula ukushintshwa kwama-interlocutors.Imfihlakalo enjalo :)
Kubonakala sengathi sesikwenzile konke, kodwa kukhona eyodwa enkulu kodwa!abaxoxisana nabo ngeke bazwe omunye nomunye, futhi ngenxa yalezi zinhloso sidinga izinhlelo ezinjengalezi: Imitha yezwi VoiceMeeter kanye ne-VoiceMeeter Virtual Cable ngaphandle kwalezi zinhlelo, abaxoxisi bethu ngeke bazwane nganoma iyiphi indlela.
Landa futhi ufake izinhlelo zethu, zinikeze ukufinyelela: bese uqhubekela kuzilungiselelo zomsindo.Kudingekile ukukhetha imakrofoni yethu engxenyeni eyodwa(ukuze sikwazi ukungenelela nganoma yisiphi isikhathi engxoxweni)Ungakhohlwa ukuvula ukufakwa kwe-miter yezwi kuphaneli yokulawula umsindo, ngaphandle kwalokho ngisho nangemva kwezilungiselelo umsindo ngeke usebenze.
Sivula uhlelo lwe-Voicemeeter lwe-microphone: kupharamitha yokuqala sibeka imakrofoni yethu, kanti okwesibili ku-A1 - izipikha zakho ku-A2 - KS: I-VB-audio Point, yilokho kuphela umsindo okufanele usebenze kubo bonke abaxhumanisi ababili kuhlanganise nawe.
Izinto zincane: Njengoba ngibhale ngenhla, udinga ukulungisa esinye isigcawu lapho kuzovuleka khona ikhamera yakho yewebhu noma enye into, isibonelo, omemezayo, qaphela - abamemezayo ngoba akubona bonke abantu abanenhliziyo eqinile.
Ungakhohlwa futhi ukusetha indawo yokushintshela kuma-hotkeys ukuze izisulu zethu ezingalindelekile zingangabazi ukuthi lolu uhlobo oluthile lwemfihlakalo :) Ukulungiselelwa kwenziwa kuma-hotkeys.
I- Chatrouletteingumphathi wamahhala wokuhlangana nabantu ongabazi ku-inthanethi nabangane.Akudingi ukubhaliswa, ngemuva kokufakwa, ungakwazi ukuxhuma ngokushesha ku-interlocutor.
I-roulette yengxoxo yevidiyo yazuza ukuthandwa kwayo njengokuzijabulisa, kodwa insizakalo ingeyomphakathi ngokwemvelo.Kokubili amaRussia kanye nezakhamizi eziye phesheya ngezikhathi ezithile ziza lapha zizofuna umlingani womphefumulo, ngakho-ke i-roulette yengxoxo ivakashelwa abantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-200 nsuku zonke futhi izibalo ziyaqhubeka nokukhula.
I-Chatruletka ye-Android iwukuxhumana okungaziwa kakhulu nabantu okungenzeka awusoze wahlangana nabo empilweni yangempela.Le ndlela ayithwali abasebenzisi nganoma yini futhi ayifaki noma yiziphi izibopho.
Izici zohlelo lokusebenza lwe-Chatroulette:
wonke amazwe omhlaba;
ubuntu abaningi ezithakazelisayo;
Ngomsebenzi ogcwele, kuyadingeka ukunikeza uhlelo lokusebenza ukufinyelela kudatha eceliwe.Ngaphansi kwewindi levidiyo kukhona ingxoxo yombhalo, okungukuthi, awukwazi ukukhuluma kuphela kumakrofoni, kodwa futhi uhambisane ne-interlocutor.Amawindi angashintshwa futhi ashintshwe usayizi.
Isevisi ye-Chatroulette ethandwayo ilula ngenxa yokungaziwa, uma ufisa, ungashintsha izwe ohlala kulo kanye nesifunda sokusesha.Noma ubani angazizwa ekhululekile engxoxweni.Kuhlale kumnandi ukuchitha isikhathi lapha.
Kubasebenzisi abanentshisekelo, ungaqhamuka nesithombe esikhanyayo noma nje wabelane nabanye ngokuzilibazisa kwakho, abanye bathanda ukuhlela imidanso noma amadili aku-inthanethi anomsindo.
I-Chatroulette ye-Android iyindawo lapho ungavele uphumule futhi ube nesikhathi esimnandi, uthole umlingani wakho womphefumulo, noma ngisho nomlingani womphefumulo wakho.Uhlelo lokusebenza lungasetshenziswa kuphela izingane ezinemvume yabazali, noma ngezilawuli zabazali.
Ukufaka i-Chatruletkaudinga ukulandalolu hlelo lokusebenza
Ungalanda i-Chat Roulette ye-Androidmahhala ngesiRashiya ngezansi ngesixhumanisi esiqondile.